Nagu Saabsan | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Nagu saabsan Context link
Ka caawinta dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad qabta®
UnitedHealthcare waxay u heellan tahay inay dadka ka caawiso inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh iyo ka dhigto nidaamka caafimaadka mid si fiican ugu shaqeeya qof kasta.
Waxaan u adeegnaa malaayiin dad ah oo ka hela caymiskooda barnaamijyada gobolka sida Medicaid Context link
Waxaan bixinaa qorsheyaal badan oo loogu talagalay:
Hooyooyinka uurka leh iyo ilmahooda.
Carruurta da'doodu tahay ilaa 19 jir.
Dadka waaweyn iyo qoysaska xilliyada dhaqaale xumada.
Dadka la nool naafonimada ama xaaladaha kale ee caafimaad ee halista ah.
Dadka u baahan in la caawiyo si ay ugu noolaadaan si madax-bannaan.
Waayeellada u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba.
Waxaan nahay hormuudka qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee Maraykanka.1 Context link
UnitedHealthcare Dual Complete® wuxuu caymiyaa dadka u-qalma Medicaid iyo Medicare labaduba.
Waxaan u adeegnaa xubno badan oo labada caymis u-qalmo oo joogo gobollo badan marka loo eego shirkad kasta oo kale oo daryeelka caafimaadka.1
Miyaad raadinaysaa nooc kale oo Qorshaha Medicare ah?
Miyaad raadinaysaa nooc kale oo qorshaha UnitedHealthcare ah?
Hel qorshayaasha ka jira aaggaaga Context link
* Iyadoo ku saleysan saamiga suuqa qaranka laga bilaabo 2021